Umadda Somliland waa gob xog-ogaal ah • Oodweynenews.com Oodweyne News
Umadda Somliland waa gob xog-ogaal ah
Dawladda Somaliland ee wakhtigan: Heshiiska aad la gasheen D.P World iyo dawladda Isutaga Imaardka, wuxuu idiin fuli karaa idinkoo mugdiga ka saara oo miiska soo dhiga qodobada dhabta ah ee uu heshiisku ka kooban yahay. Aduunka laguma arag wadan golayaashiisu ansixiyaan wax aad ugu yeedheen (nuxur heshiis). Umadda garaadkooda in la caayo marna ma haboona. Siyaasadda hogaamineed ee dhaxalka wacan reebtaa, in aad dadkaaga kugu aaminay talada, kuguna dhaariyey, aad runt ka qariso, ma aha, in anigaa tan la ii doortay oo waxaan doonaan yeeli, ma aha. Waxaad ku khamaarteen oo miiska dul dhigteen ishii dhaqaale ee kali ahayd ee Somaliland lahayd wakhtigan. Waxaynu ognahay in ayna umaddu idinku raacsanayn, aadna u saluugsan tahay sida liitata ee aad u baayactanteen oo ay ka muuqato deg deg, aqoondaro iyo cad quudheed aad ku qanacdeen. Mar hadii ay sidaa garasho idinka noqotay, waxay umaddu idiinka fadhidaa heshiiskaa dhinaca ka raran in aad ugu bedeshaan ictiraaf buuxa marka ay ugu yaraato. Wixii ictiraaf ka yar umaddu waxay u aragtaa in xukuumaddu ka hiilisay ummaddii talada u dhiibatay. Waana xisaab la hor dhigi doono xukuumadan maanta talada haysa. Dariiqyo la inoo dhiso iyo daaro ringi la inoo mariyo uma dhigmaan waxaynu ku bedelalayno dekada iyo saldhiga Berbera. Waa in miiska gorgortanka aad dul dhigtaan ictiraaf, si ay umaddu u liqdo heshiisyadan. Umadda reer Somaliland waxay si buuxda idiinku
taageeraysaa go’aankii uu madaxwayne Somaliand cod dheer ugu gudbiyey dawladda federaalka ee Soomaliya in aynu la qaadanay dagaalka ay iyagu iclaamiyeen. Madaxwayne waxay umadda Somaliland kaaga fahdidaa in aad ka dhabayso dagaalkaa aad qaadatay adigoo si rasmi ah u joojinaya wxii loogu yeedhi jiray wada hadalada Somaliland iyo Somaliya. Madaxwayne waxay umaddu ku faraysaa in aad xuduuda wadanka aad soo xidho sidii aad hore ugu balan qaaday, adigoo aan dheg jelaq u siinayn waxaa ay kuula iman doonaan hay’adaha UN-ka, kuwa reer Yurub isku sheega, Kuwa Africa iyo wixii la mid ah. Somaliland aayaheeda inay u taliso iyadaa leh. Waxaa umadda u muuqata in ay wakhtigan ugu haboon tahay in la soo xidho xuduuda wadanka. Ruqaansi marba meel wadanka dhexdiisa ah ciidamada Somaliland lagu lugooyo, wakhtigeeda wuu dhamaaday.
Dawladda Isu-taga Imaaraadka Carabta: Umadda Somaliland waxay idinla wadaa heshiis uu idiinku jirto fa’aaidooyin shilis marka la isbarbar dhigo waxa ay umadda Somaliland ka helayso. Hadaba, waxa ugu muhiimsan ee aan Somaliland ahaan ku hirgalin karnaa heshiiskan waa idinkoo ictiraafa, aqoonsada Somaliland. Waxaad tihiin dawlad caalamka laga tixgaliyo oo xaq u leh in ay ictiraafto cid kasta oo ay u arkaan in ay dantoodu ku jirto. Danahiina iyo kuwayagaba ayey
ku jirtaa in aad ictraaf u doontaan Somaliland. Dani inooguma jirto in aad isqabqabsataan dawladda federaalka Somaliya. Idiinkama fadhino in aad nagu maaweelisaan mashaariic yaryar oo aan anaguba qabsan karno. Uamdda Somaliland way ka war haysaa, marka ay timaaado cida aduunku taladu ka go’do. Waan ognahay in ayna idiin fududayn in aad idinku ictiraafkayaga aflaxdaa, Hase yeeshee waxaad xidhhidh dhaw la leedihiin quwadaha waaawayn, kuwa muuqda iyo kuwa aan muuqanba ee taladad aduunka gacanta ku haya. Qadiyadayada ula taga, ka soo dhameeya ictiraafka Somaliland. Saaxiibadiin isku-kayo soo dhaweeya. Dantayada iyo tiinuba halkaasay ku jirtaa. Ku meeraysiga wax intaa ka yar, labadeenaba faa’iidooyin waawayn oo inooga soo bixi kara heshiisyada aynu hawlan nahay wakhtigan ma muuqdo.
Abdirizak Ahmed Jama rizakj@yahoo.com